News - Sida loo rakibo Xaashida Muraayadda Acrylic
Sida loo rakibo Xaashida Muraayadda looxa
Xaashida looxa loo yaqaan 'Acrylic mirror sheet' ayaa ka dhigaysa mid wax ku ool ah oo qurux badan lagu daro darbiyada, albaabada, iridda laga soo galo iyo waxyaabo kale, iyada oo lagu darayo taabasho casri ah meel kasta oo aad ku rakibto. miisaanka. Si fudud ayaa loo goyn karaa loona qaabeyn karaa si uu ula jaan qaado qaab gaar ah, taasoo la micno ah inaad ku rakibi karto dhowr xaashi oo waaweyn oo darbiga muraayadda qoraalka ah ama aad ku rakibo karto qaybo yar yar taabashada qurxinta kaleidoscopic. Xaashida loo yaqaan 'Acrylic mirror sheet' sidoo kale way ka dabacsan tahay muraayadda, taasoo la micno ah inay la jaan qaadi karto wixii khaladaad ah ee ka jira dusha sare ee aad ku dhajineyso. Haddii aad rabto inaad baabi'iso fursad kasta oo dhalanrog ah, u tag acrylic dhumuc weyn, maadaama ay ka dabacsan tahay oo ay leedahay sharaf sare oo muuqaal ah.
Haddii aad rabto inaad ku rakibto xaashida muraayadda loo yaqaan 'acrylic mirror' gurigaaga ama meheraddaada, raac talooyinka hoose si aad u hubiso in rakibiddaadu u socoto si habsami leh.
Ka hor intaadan dhigin xaashidaada muraayadda looxa, waxaad u baahan tahay inaad diyaarsato aaggaaga shaqada:
• Cabir booska aad ku dhejineyso acrylic-ka si sax ah - halka tani ay tahay caarad muuqata, waxaa muhiim ah in sidan loo sameeyo si ka harsan rakibiddaada ay si fiican u dhacdo.
• Ka yareyso 3mm mitir kasta cabirka - tusaale ahaan, haddii dusha sare uu ahaan lahaa 2m x 8m, waxaad ka goyn doontaa 6mm dhinaca 3 mitir ah iyo 24mm 8 mitirka ah. Tirada soo baxday waa cabirka ay tahay in xaashidaada acrylic ay ahaato.
• Hayso lakabka polyetylenka ah ee ay xaashida acrylic la socoto si loo hubiyo inaysan waxyeello u soo gaarin ama aan la wasakheynin inta lagu jiro hawsha rakibidda.
• Calaamadee meesha aad u baahan tahay inaad ku qodaan, ka jarto ama ka aragto xaashidaada si aad uga dhigto cabbirka saxda ah. Tan ku samee filimka difaaca, ee ha u samaynin xaashida looxa.
• Haddii aad u goyneyso xaashidaada acrylic-ka cabbir ahaan, hubi in dhinaca muraayadda leh ee filimka difaaca uu ku soo wajahayo, si aad u aragto sida ay u socoto inta lagu jiro howsha rakibidda.
Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad diyaarsato dusha sare ee xaashida looxa lagu marin doono. Qaar ka mid ah agabyada ku habboon si loo mariyo xaashidaada muraayadda loo yaqaan 'acrylic mirror sheet' oo ay ku jiraan gypsum-ka biyuhu ka ilaaliyaan, muraayadda muraayadda go'an, balastar, dhagxaan ama derbiyo la taaban karo, qori dhejis ah iyo darbiyada MDF Si loo hubiyo in dusha sare uu diyaar u yahay rakibaadda, hubi inuu gabi ahaanba yahay mid siman, siman oo aan lahayn qoyaan, dufan, boodh ama kiimikooyin. Si aad u hubiso in dushaada aad dooratay ay taageeri karto xaashida looxa, isku day inaad ku duubto saxankaaga si aad u ogaato inay miisaanka taageeri karto. Ka dib markaad xaqiijiso in dushaada ay leedahay awoodda xamuul qaadista ee loo baahan yahay, waxaad si kalsooni leh u bilaabi kartaa rakibiddaada. Raac tallaabooyinka soo socda si aad u dhammaystirto rakibid siman:
• Ka saar filimka difaaca dhinac ka ah xaashida wajihi doonta dusha sare kuna nadiifi astaamaha batroolka ama aalkolada isopropyl.
• Xulo wakiilka isku xidhka, kaas oo noqon kara cajalad laba-geesood ah, acrylic ama silikoon dhejisyo ah. Haddii aad isticmaaleyso cajalad, dhig xariijimaha jiifka ah si siman dhammaan ballaca xaashida muraayadda akril.
• Ku hay xaashida xagasha 45 ° meesha aad damacsan tahay inaad dhigto. Hubi si aad u aragto inaad gebi ahaanba ku faraxsan tahay isku xirnaanta, maadaama tani ay tahay fursaddii ugu dambeysay ee aad ku saxdo wixii arrimo ah ka hor intaadan warqadda ku darin substrate-ka.
• Ka saar warqadda cajaladdaada laba-geesoodka ah oo ku hay cidhifka kore ee xaashida dusha sare isla xagalka 45 °. Isticmaal heer ruuxi ah si aad u hubiso inay toos ugu taagan tahay derbiga, ka dibna si tartiib ah u yaree xagasha xaashida si ay si fiican ugu dul daadato substrate-ka.
• Si adag u riix xaashida si aad u xaqiijiso in cajaladdu u dheggan tahay gabi ahaanba - sii riix ilaa inta aad u baahan tahay inaad hubiso in xabagta ay gebi ahaanba saameyn ku yeelatay.
• Mar haddii xaashida la hubiyo, ka saar filimka difaaca qaybta muraayadda ee hadda adiga ku soo wajahan.
Iyada oo ay jiraan xoogaa xirfado aasaasi ah, qofkasta wuxuu ku rakibayaa xaashiyaha muraayadda acrylic-ka ah gurigiisa, ganacsigiisa ama hantidiisa maalgashiga. Ku dar muraayad bayaan ah musqushaada, qurxinta bilicsanaanta qolkaaga jiifka ama ku dar taabasho nuur ah aag kasta oo kale oo ka mid ah dhismahaaga adoo ku dhejinaya xaashida muraayadda akriliga ah adoo mahadsan talooyinka kor ku xusan!
Sida loo rakibo xaashida muraayadda loo yaqaan 'acrylic mirror'. (2018, Maarso 3). Waxaa laga soo qaatay Oktoobar 4, 2020, oo laga soo xigtay worldclassednews:https://www.worldclassednews.com/install-acrylic-mirror-sheet/